को जाडो खेल को सबै प्रकार अक्सर दुई भन्दा शानदार पहिचान। यो हकी र Biathlon। सोभियत संघ, र त्यसपछि रूस, सधैं आफ्नो merits र यी खेल मा उपलब्धिहरू गर्व गरिएको छ। को Biathlon मा हकी वा Tikhonov (चार-समय ओलम्पिक च्याम्पियन) मा कम्तिमा नै Kharlamov प्राप्त गर्नुहोस्। हकी गियर संग स्पष्ट छ - स्केट्स, छडी, टोप। स्किइङ र शूटिंग - वास्तवमा यो एक डबल खेल किनभने Biathlon संग, धेरै रोचक र आकर्षक छ। पनि आन्दोलन लागि सबै उपकरण आदर स्पष्ट छ: मुख्य कुरा हो - मौसम गर्न स्नेहक अनुमान, तर राइफल छ biathlete हतियार, संग, छैन त सजिलो छ। यो सफलता को एक परिणाम रूपमा ब्रान्ड को एक कठिन विकल्प गर्न पार्टी शूटिंग मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले अनुभवी खेलाडीहरूलाई राम्ररी हतियार को विकल्प गर्न अनुकूल। र यो Biathlon राइफल जस्तो देखिन्छ? यसलाई पछि लेखमा मा पाठक गरेको ध्यान प्रस्तुत गरिनेछ तस्बिर। तबसम्म हामी इतिहास मा एक सानो भ्रमण बनाउन र परिस्थिति खेल हतियार यस प्रकारको गरे जब र के अन्तर्गत पत्ता।
द्वितीय विश्व युद्ध को निष्कर्षमा यो आधुनिक Biathlon को प्रोटोटाइप थियो सार मा सबै भन्दा लोकप्रिय सैन्य गस्ती थिए। समयमा उपकरण एक पारंपरिक सेना लडाई हुन Mosin राइफल, पूर्ण पनि भयो र संगीन जो। खैर, तिनीहरूले जर्मनी संग युद्ध समयमा सोभियत सेना संग सेवामा थिए।
धेरै बहस पछि, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति, 1960 मा, त्यहाँ शीतकालीन ओलम्पिक मा एक लामो-प्रतीक्षा debut प्रदर्शन Biathlon थियो। सोभियत खेलाडीहरूलाई लागि प्रयोगात्मक निर्माण जारी राइफल गर्न चासो Kalashnikov "बैथ्लोन-59।" बैथ्लोन राइफल दृष्टि समय diopter थियो। यो पनि एउटा पोर्टेबल पट्टियाँ र विशेष सुरक्षा कवर संग सुसज्जित छ। वजन Biathlon राइफल गर्दा कडाई नियमन छैन।
आधुनिकीकरण र सुधार मा कोर्स
1960 मा शीतकालीन ओलम्पिक, हतियार डिजाइनर Sherstyakov, आधारित Mosin राइफल पछि, Biathlon लागि नयाँ हतियार उत्पादन। फलस्वरूप बाहिर गरिएका छ जो नमूना, दुई संस्करण मा उत्पादन, र कैलिबर "Biatlon द्वि-7.62" र "Biatlon द्वि-6,5 '(कारतूस अतिरिक्त आधारमा नाम भए 7.62 मिमी र 6.5 को आयाम मिमी, क्रमशः)।
यो हतियार प्रयोग सोभियत biathletes को 1964 शीतकालीन ओलम्पिक मा विशेष व्लादिमीर Melanin पहिलो ओलम्पिक सफलता, ल्याइएको हो नाइस को Biathlon पहिलो स्वर्ण पदक जित्न सक्षम थियो मा।
प्रारम्भिक सत्तर को दशक मा सुरु rimfire बारूद संग गरियो जो शूटिंग नयाँ राइफल, को "बैथ्लोन बी-4" जारी। मोडेल एक एकदम कम वजन भएको थियो। अर्को नवीनता अघिल्लो को रिलीज पछि बस एक वर्ष जारी भएको थियो, र नाम थियो "बैथ्लोन द्वि-5।" गोलीबारी कारतूस केन्द्रीय युद्धभूमिमा 5.6 मिमि कैलिबर लिए कि सञ्चालन भएको थियो। यो सुनको चार-समय ओलम्पिक च्याम्पियन Aleksandra Tihonova को विजयी procession यो राइफल छ।
छैन सोभियत संघ मा मात्र Biathlon लागि हतियार बनाउन सक्षम थिए। यसलाई उल्लेख र विदेशी निर्माताहरु गर्नुपर्छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध फिनल्याण्ड र अष्ट्रीया बनेको जर्मनी ले "Anschutz" र "वाल्टर", "Sako" जस्ता कम्पनीहरु "Staer Mannlicher।"
"Anschutz" सबै भन्दा ज्ञात र untwisted Biathlon राइफल। यो कम्पनीको नेतृत्व पूर्णतया यस्तो सुविधा रूपमा मापदण्ड अनुसार जर्मन खेलाडीहरूलाई व्यवस्था जो हुनेछ र शक्ति recoil, Biathlon लागि राइफल विकास गर्न जर्मन सेना बैथ्लोन टोलीमा सम्बोधन गरेको छ थियो। यसरी सिर्जना गर्न, नयाँ हतियार सबै भन्दा राम्रो संलग्न साना-कैलिबर राइफल, maloimpulsnogo क्यासेट केन्द्रीय ज्वलन, एक .222 कैलिबर थियो जो अन्तर्गत यो perfecting, त्यो समय थियो जो "Antshutts-54"।
1978 Biathlon को विकास मा एउटा कोसेढुङ्गो मानिन्छ। सानो-कैलिबर हतियार गर्न संक्रमण खेल सुलभ र व्यापक बनाए। र यो महत्त्वपूर्ण घटना को initiator नै जर्मन दृढ "Anschutz", आफ्नो countrymen र निर्माण त्यस्तो हतियार द्वारा कमीशन छ जो थियो। जसको खेलाडीहरूलाई खेल मा सबै भन्दा राम्रो थियो देश, अर्थात् सोभियत संघ, नर्वे, फिनल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका संसारको Biathlon आफ्नो ओहदा गुमाउनु र साना-कैलिबर सेना हतियार देखि सार्न चाहँदैनथे।
त्यसैले, नयाँ कैलिबर उत्प्रेरित गर्न गरियो जो एक मत, लागि, त्यहाँ नयाँ हतियार एक विशेष प्रबल समर्थकहरूको थियो। र त्यहाँ विश्व कप नयाँ हतियार सेवा मा स्वीकार गरिने छैन भने, 1978 मा Biathlon मा पकड गर्न अस्वीकार कि अष्ट्रीया पार्टी को "राजनीतिक कालो बजार" भएको थियो। तीन सदस्य मूल निर्णय परिवर्तन गर्न मतदान, र ब्यालेन्स नयाँ मोडेल को पक्षमा टिप दिनुभयो छ।
त्यसैले, जर्मन निर्माता र खेलाडीहरूलाई दुनिया Biathlon नेताहरू मा तोड, आफ्नै क्षेत्रमा प्रत्येक। गठन मानक खेल हतियार प्रकारको: - 5.6 मिमी, अधिक सामान्यतः .22lr रूपमा चिनिने ठूलो कम्तिमा 3.5 किलो, कैलिबर राइफल Biathlon हुनुपर्छ। गोला, बारूद rimfire हुनुपर्छ।
सानो-कैलिबर हतियार गर्न संक्रमण को नतिजा दूरी एक कमी लक्षित थियो -। अब यसलाई 50 मिटर जर्मन biathletes 1978 मा बैथ्लोन विश्व च्याम्पियनसिप, नयाँ नियम अन्तर्गत आयोजित मा नौ सुन पदक सात जित्यो गरेको छ। को सोभियत संघ अलेक्जेन्डर Privalov, दुई ओलम्पिक खेल को एक पूर्व पुरस्कार विजेता को टाउको कोच, हतियार विस्थापन गर्दैन सोभियत संघ राष्ट्रिय टीम को विनाशकारी प्रदर्शन दोष र प्रयोग skis एक नयाँ तरिका र गलत तरिकाले मिलान चिल्लो।
नियम को परिवर्तन गर्न पर्याप्त प्रतिक्रिया
Gunsmiths र डिजाइनर Izhmash मा (इजेभ्स्क मिसिन-भवन प्लान्ट) तुरून्त जो प्रयोग नयाँ राइफल "बैथ्लोन बी-6," शुरू , रिम-आगो कारतूस अनुसार नयाँ आवश्यकताहरू संग।
नयाँ हतियार को यस्तो तीव्र जारी रहस्य एकदम banal बताए छ: Mosin राइफल को आधार प्रयोग प्रारम्भिक 60s मा जस्तै, नमूनाहरू "बैथ्लोन द्वि-7.62" र "बैथ्लोन-द्विपक्षीय 6.5" विकास गरिएको छ, र यो समय डिजाइनर "यूराल-5-1" र "यूराल-6-1" को संस्करण समाप्त र गहिरो आधुनिकीकरण "बैथ्लोन द्वि-6" द्वारा सिर्जना गर्नुभएको छ।
एयर राइफल Biathlon मात्र फारम कारक एकाइहरु र केही विशिष्ट स्थान मा सबै निर्माता लागि लगभग एउटै र अलग छ। कुनै पनि मामला मा, सबै मतभेद नियमन र कस नियन्त्रण हो। मानक घटक र संयन्त्र हुन्छन् जो उपकरण Biatlonnaya राइफल, एक बैरल, एक काठ बक्स, एक गेट ट्रिगर दृष्टि र स्टोर छ। डिजाइन गर्दा अतिरिक्त छाप थपेर यसको रैखिक आयाम परिवर्तन गर्न आवश्यक बट अनुमति दिन्छ। तपाईं पनि Biathlon राइफल्स लागि बेल्ट आवश्यक छ। यो सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प छ किनकी यो केवल झोला संस्करण लागू हुन्छ। दृष्टि Biathlon राइफल मात्र diopter, निषेध एक अप्टिकल प्रयोग हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत समायोजित र, उदाहरणका लागि राइफल अन्य भागहरु समायोजन गर्न सकिन्छ, "गालामा" (को बट को माथिल्लो भाग) र गोफन लागि हुक भएको पट्टा। हतियार को ठूलो को केन्द्र थप्दा वा संतुलन वजन कम गरेर समायोजित गर्न सकिन्छ। तीव्र overcharging राइफल, परिक्रमा को ठाडो अक्षहरूमा को माध्यम ले बैरल खन्नु लक गर्दछ कि एक सनकी संयन्त्र मार्फत प्रदर्शन गर्ने खेलाडी को स्थिति परिवर्तन बिना।
सुरक्षा कवर बैरल च्यानल दूषण, हतियार दृष्टि र दूरदृष्टि सबै प्रकारका विरुद्ध सुरक्षा को आफ्नो कार्य पूरा। को सटर संयन्त्र को डिजाइन optimally को थिचेर शक्ति समायोजन, हतियार को disassembly बिना ट्रिगर को ट्रिगर, साथै वंश को प्रकृति सार्न। Biathlon को उपस्थिति यसका नियमहरू सहमत छ: का बस longitudinally स्लाइड बोल्ट Biathlon राइफल घुमाउँदै, र 1978 को घटनाहरू संयन्त्र विभिन्न डिजाइन मोडेल को प्रयोग अधिकृत मात्र पछि गरौं।
सटर संरचना दृढ "Anschutz"
प्रत्येक कम्पनी, खेल राइफल्स निर्माण मा लगी भएको छ जो, विकास र यसको गेट संरचना लागि हतियार उत्पादन गर्छ। "Anschutz" को जर्मन निर्माता निरन्तर यसलाई सुधार, 1935 मा विकसित भएको थियो डिजाइन जो शटर, प्रयोग गर्दछ।
पूर्व 1984 मा, ब्रान्ड को सबै हतियार रोटरी संयन्त्र संरचनात्मक तत्व प्रयोग संग उत्पादन गरिएको छ। पछि 1984 gunsmith पी Fortner चेतावनी बिना राइफल सटर संयन्त्र फेला, र यो डिजाइन यस दिन गर्ने कम्पनी "Anschutz" सबै मोडेल मा प्रयोग गरिन्छ। यी उपकरणहरू को एक विशिष्ट सुविधा आकार, उच्च-अन्त कारतूस लागि आवश्यक lugs को अभाव मा थप संकुचित छन्।
राइफल पुन: लोड धेरै सरल, दुई औंला संग: सूचकांक औंलाले ह्यान्डल खींच, बनाउन सटर cocking र औंठी को संयन्त्र पछाडि थिचेर आफ्नो उल्टो। साथै, रिचार्जिंग जब हतियार को विश्वसनीयता कारण आफ्नो डिजाइन गर्न मजबूती कम हावा तापमान मा आफ्नो कार्यहरु जो बेदखलदार र संडसी, असर गर्छ।
अन्य वाल्व डिजाइन
फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू पहिलो मोडेल Finnbiathlon, Tampeeren Asepaja द्वारा निर्मित नयाँ सटर डिजाइन प्रयोग गर्न छन्। यो संयन्त्र एक longitudinally-स्लाइड गति छ, र बारी छैन।
सोभियत संघ तिनीहरूलाई निम्न पनि Biathlon राइफल "बी-7", एउटै संरचना छ जो एक सटर देखिन्छ। यो उल्लेखनीय हतियार डिजाइनर Susloparova को merits उल्लेख गर्नुपर्छ। उहाँले खेल हतियार विकास सबै भन्दा प्रसिद्ध श्रृंखला "बैथ्लोन" जारी जो मास्को ओलम्पिक प्रोटोटाइप "बी-7-2", मा ठाउँ लिन तयार छोटो समयमा सक्षम थियो। नयाँ मोडेल संग ओलम्पिक मा बोल्ने, पहिले नै चिरपरिचित अलेक्जेन्डर Tikhonov रिले मा आफ्नो चौथो स्वर्ण पदक जित्यो। खैर, अर्को दुई यस विशेष राइफल को मद्दतले सोभियत संघ देखि शीतकालीन ओलम्पिक biathletes मा रिले दौड मा सुन लिए।
विकास राइफल्स "बैथ्लोन" श्रृंखला
विकास र सेवामा biathletes मोडेल "बी-7-3" र "बी-7-4" अपनाए प्रारम्भिक 90 को दशक मा सबै भन्दा प्रसिद्ध राइफल "बी-7-2" को आधारमा। स्थिर सुधारहरू यी ब्रान्डहरु को जीवन चक्र वैंकूवर मा शीतकालीन ओलम्पिक सम्म पछिल्लो हुनेछ।
1991 देखि, गर्न-Biathlon खेलाडीहरूलाई चासो Kalashnikov हतियार, को मुख्य आपूर्तिकर्ता नयाँ मोडेल "बी-7-2" को उत्पादन सुरु भयो। 1978 मा साधारण स्वीकार स्तर अनुसार, .22lr बारूद कैलिबर rimfire भइरहेको जा श्रृंखला को Biathlon राइफल्स देखि शूटिंग। पेश्की पाँच राउंड्स लागि पछिल्लो हुनेछ क्षमता जो पसलहरूमा, स्वाप कारण हो। पनि मानक, र अतिरिक्त बारूद यन्त्रको लागि तीन टुक्रा को मात्रा मा रूपमा समावेश। दौड चार स्टोर राइफल बट संलग्न भएको एक विशेष टेप छन्।
को वायवीय को बैरल च्यानलहरूको ताला hinged-लीवर रेखाचित्र हुन्छ।
को Biathlon मा शूटिंग को लागि मुख्य मापदण्ड biathletes को स्थिति परिवर्तन र नयाँ उद्देश्य मा अनमोल समय खर्च बिना छिटो RECHARGE हतियार छ। को राइफल "बी-7-2" को बैरल मा क्यासेट दाखिल विशेष ह्यान्डल एक घूमएर गति गरेको छ। एउटा सानो चाप मा चाल पुन: लोड गर्दा सटर।
यो राइफल corrector वजन थप्ने वा हटाउने द्वारा समायोजित छ जो सन्तुलन, उजागर गरिएको छ। पनि ट्रिगर खींच र ट्रिगर स्ट्रोक सेट गर्न। को बट र यो लम्बाइ मा गालामा द्वारा शासित छन् र जब शूटिंग सत्यता निर्भर सुविधाको देखि खेलाडी रूपमा प्रत्येक खेलाडी लागि व्यक्तिगत रूपमा कन्फिगर छन्। को बैरल, अगाडि दृष्टि र स्कोप राइफल जसको मुख्य कार्य हिउँ, माटो र अन्य प्रदूषक शूटिंग को शुद्धता असर गर्न सक्छ भनेर बाट हतियार सुरक्षा गर्न छ विशेष छिटो hinged Lids, सुसज्जित।
उल्लेख रूपमा, यो ब्रान्ड राइफल को उत्पादन लामो समय हो, र यो समयमा त्यो सुधार गर्न subjected र आधुनिक थियो। उदाहरणका लागि, आज जारी "बी-7-4A" मोडेल। नाम मा पत्र एक यो राइफल एक बैरल ज्ञात जर्मन दृढ "Anschutz" छ भन्ने संकेत गर्छ।
कुलीन लागि एक विशेष खेलाडी लागि नमूनाहरू, अनुकूलन समावेश गर्नुहोस्। राइफल "बी-7-4" नवौं संशोधन मा एक ब्रान्ड नयाँ बिस्तर, जो कुनै पनि biathlete को आवश्यकताहरू पूरा गर्न सेटअप हुन सक्छ छ; नयाँ पछाडिको दृष्टि एक प्रतिस्पर्धा दृढ "Anschutz" बाट; समायोजन विषय हुन सक्छ जो रिङ उड। जंग रोक्न र रिसीभर को प्रदर्शन सुधार गर्न Chrome चढाना र बैरल गर्न subjected छ। अन्य मोडेल बीच कुलीन राइफल्स "Antshutts 1827", धेरै च्याम्पियन र पुरस्कार-biathletes "सबै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो" भनिएको छ जो छुट्टयाएर।
महिलाहरु को अंतरंग स्वच्छता के हो?
कसरी आफ्नो हातमा टायर के?
Endometrioid सानो ट्युमर
स्टिकर विज्ञापन, तिनीहरू को हुन्?